Marika telefaona dimy no be mpividy indrindra amin'ny avo lenta | Androidsis
Marika dimy no manjaka amin'ny tsena avo lenta
Ny tsenan'ny smartphone avo lenta dia nivoatra be tato ho ato. Mihamaro ny mpampiasa mitady ny hividy ny kalitao faran'izay avo lenta na ny finday avo lenta indrindra amin'ny tsena. Ka mankany amin'ny segondra premium izy ireo. Sehatra iray izay nitombo ihany koa ny fifaninanana. Na dia amin'ity tranga ity aza dia misy marika dimy manjakazaka aminy.
Ny anaran'ny sasany amin'izy ireo dia tsy hahagaga, satria efa kilasimandry ao amin'ity ampahan'ny avo lenta ity izy ireo. Ity no an'i Apple na Samsung, ny roa lava indrindra amin'ity faritra ity. Fa ny iray amin'ireo anarana amin'ireo dimy ireo dia mety hahagaga, dia ny raharaha OnePlus.
Manokana, ireo marika dimy manan-danja indrindra amin'ity sokajy avo lenta ity ankehitriny dia: Apple, Samsung, Huawei, OPPO ary OnePlus. Ny marika amerikana dia manohy manjaka an'ity ampahana ity, amin'ny ampahany satria ao anatiny no misy ny telefaona finday iray manontolo. Fa very ny tanjaka eo amin'ny tsena.
Apple dia mandray anjara amin'ny tsena 51% amin'ity sehatra ity. Samsung dia eo amin'ny laharana faharoa miaraka amin'ny 22%, raha mbola manohy mandroso amin'ny maodely premium i Huawei, efa mahazo fizarana tsena 10%. OPPO dia marika iray hafa efa lasa lavitra, ary tavela amin'ny 6% ary efa mihidy amin'ny 2% ny OnePlus.
Lisitra mahaliana izy io, saingy mampiseho ny fomba fahafantaran'ireto marika ireto ny fomba fizarana ity ampahany amin'ny faritra avo lenta ity. Apple sy Samsung dia veterana roa sahady. Huawei dia marika iray izay manana fandrosoana roa taona, miaraka amin'ny varotra tena tsara amin'ity sehatra ity. Raha OPPO sy OnePlus dia mitombo be koa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, izay manampy amin'ny fisian'ny lehibe kokoa.
Mahaliana ny mahita raha ireo marika dimy ireo mahaiza mijanona eo an-tampon'ireo marika amidy indrindra any amin'ny farany ambony. Hatramin'ny nitombo ny fifaninanana. Ka tsy maintsy manao izay tsara indrindra amin'ny katalaoginy izy ireo handresen-dahatra ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Marika dimy no manjaka amin'ny tsena avo lenta
Ny varotra Huawei dia nitombo 50% tamin'ny telovolana voalohany
Moto Z4 tafaporitsaka tanteraka: Snapdragon 675, efijery OLED, fakantsary selfie 25 MP sy maro hafa